Life in Fukuoka "Nepali" Vo.65
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य（医療・保健） , समुदाय（コミュニティ） , बालबच्चा तथा शिशु हुर्काई（子ども・子育て）
वर्षायामको प्रतिनिधित्व गर्ने फूल, आजिसाई; अंग्रेजीमा हाइड्रेंजिया भनिन्छ, नेपालीमा चै के भन्छ थाहा भएन। यो फूल, घमाइलो दिनमा मात्र होइन, वर्षामा फूल फक्क्रेको दृश्य पनि राम्रो र सुन्दर हुन्छ।
आजकल पश्चिमी हाइड्रेंजिया र गाकु हाइड्रेंजिया दुबै विविध प्रकार, आकार र रंगहरूमा पाईन्छन्।
हाइड्रेंजिया हुर्काउने तरिका सरल छ, तर अर्को वर्ष पनि फूलहरू फूलाउनका लागि भने विशेष कटाईको आवश्यक पर्छ। एक पटक रोपेपछि, लामो समयसम्म आनन्द लिन सकिने लामो समय बाँच्ने यो बोट, प्रत्येक वर्ष फूलहरूको संख्या बढ्दै गएर शानदार बोट बन्दछ।
फुकुओका शहरमा पनि, Uminonakamichi Seaside Park, Hakozaki Shrine, Maizuru Park, Fukuoka City Botanical Garden आदि स्थानहरुमा यस समयमा सुन्दर हाइड्रेंजियाहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
【ट्यूटर प्रोग्रामको परिचय】
नर्सरी वा स्कूलको पत्रहरू आदि जापानी भाषामा भई, बिषयवस्तु बुझ्न समस्या भईरहेका विदेशीहरूको सहयोग गर्ने "ट्यूटर प्रोग्राम" को परिचय दिनेछु।
फाउण्डेसनमा रजिस्टर भएका स्वयंसेवकहरु प्रत्यक्ष वान् टु वान् ट्यूटर बन्न सक्नुहुन्छ, र अनलाइनमा नर्सरी वा स्कूलको ह्यान्डआउट वा पत्र, त्यस्तै वार्ड अफिसबाट आएको हुलाकपत्र आदिको सरल अनुवादका लागि अनुरोध र दैनिक जीवन सम्बन्धि सल्लाह माग्न सक्नुहुन्छ।
ट्यूटरसँग अनलाइन कुराकानी गर्न सक्ने, फुकुओका शहरमा बस्नु हुने विदेशी महानुभावहरु, जो कोहीले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
सामान्यतयाः, प्रयोग शुल्क प्रति महिना ५०० येन जति लाग्छ, तर यस वर्ष नोभेम्बरसम्म निःशुल्क हो।
प्रयोग गर्ने तरिका आदि बिस्तृत जानकारीका लागि, कृपया फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको होमपेजमा हेर्नुहोला वा फोन मार्फत् सम्पर्क गर्नुहोला। फोन नम्बर ०९२-२६२-१७९९।
सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान पौने ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा उपलब्ध छI अवश्य सम्पर्क गर्नुहोलाI
फुकुओकामा बस्दै गरेका विदेशीहरूका लागि “कानूनी परामर्श” र “मानसिक परामर्श अर्थात् व्यक्तिगत परामर्श” को जानकारी रहेको छ I
“कानूनी परामर्श”, हरेक महिनाको पहिलो शनिबार, बिहान १०:३० देखि दिउँसो १:३० बजेसम्म र, तेस्रो बुधबारको दिउँसो १ बजे देखि ४ बजेसम्म, परामर्श अवधि ४५ मिनेट, वकिलद्वारा निःशुल्क परामर्श प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छI
बुकिंग वा विस्तृत जानकारीका लागि, फोन नम्बर ०९२-२६२-१७९९ मा सम्पर्क गर्नुहोलाI
सोमबारदेखि शुक्रबार, बिहान पौने ९ देखि बेलुका ६ बजेसम्म सेवा उपलब्ध छI
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.64
नियम तथा आचरण（ルール・マナー） , बालबच्चा तथा शिशु हुर्काई（子ども・子育て）
जुन १३ "FM दिवस" थियो। F अल्फावेटको छैठौं र M तेर्हऔं बाट आएको हो। तर कहिले, कसले र कुन उद्देश्यका लागि बनाएको थाहा छैन।
Frequency Modulation को संक्षिप्त FM हो भने, Amplitude Modulation को संक्षिप्त AM हो।
तपाईंहरुमध्ये कोही रेडियो सुन्दै काम गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ होला।
हालसालै, स्मार्टफोन र कम्पुटरबाट रेडियो सुन्न सम्भव भएको छ, तर "FM" र "AM" बीच के भिन्नता छ होला त? सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको ध्वनि हो।
"AM" को मामलामा, आयाम परिवर्तन गर्ने भएकोले, यदि आयाम कम भएको बेलामा ध्वनि छिर्यो भने, सहि संकेतको रूपमा पहिचान हुन पाउँदैन। यसको विपरित, "FM" को मामलामा, त्यस्तो कुनै समस्या छैन।
श्रव्यताको मामलामा, "AM" भन्दा "FM" उत्तम छ।
यसको विपरित, "FM" केवल एक सीमित दायरामा प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर "AM" विस्तृत दायरामा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
संगीत र कुराकानीको मनोरञ्जन दिने रेडियो, अभूतपूर्व छ।
【बाल भत्ताको वर्तमान स्थिति प्रतिवेदन सम्बन्धि】
जुनियर हाईस्कूलसम्मका बच्चाहरुलाई हुर्काउँदै गरेको व्यक्तिहरुलाई बाल भत्ता प्रदान गरिंदै आइरहेको छI
भत्ता रकम, बच्चाको उमेर वा तपाईंको आम्दानी अनुसार प्रति बालक महिनाको ५,००० देखि १५,००० येन होI
४ महिनाको एकमुष्ठ रकम; जुन, अक्टोबर र फेब्रुअरी महिनाहरूमा भुक्तानी गरिनेछI
बाल भत्ता प्राप्त गर्नको लागि तपाईंले हरेक वर्ष वर्तमान स्थिति प्रतिवेदन (गेन्क्योउ तोदोके) बुझाउनु आवश्यक छI
जुन महिनाको शुरुतिर, फुकुओका शहरबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई वर्तमान स्थिति प्रतिवेदनको कागजपत्र पठाईएको छI
कृपया आवश्यक जानकारीहरु भरेर, जुनको ३० तारिखभित्र पुग्ने गरी हुलाक मार्फत पठाउनु होलाI
साथै, माई नम्बर कार्ड प्रयोग गरि अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सक्नुहुन्छI
यदि तपाईंले यो रिपोर्ट बुझाउनु भएन वा पूर्ण विवरण पेश गर्नु भएन भने, तपाईंले यो भत्ता पाउनुहुन्नI त्यसैले कृपया ध्यान दिनुहोलाI
जनवरी १ देखि फुकुओकामा बस्दै आउनुभएको व्यक्तिको, यदि अघिल्लो वर्षको आय १०लाख नाघेको भए, फुकुओका प्रान्तको कर तिर्नु पर्ने हुन सक्दछ।
कम्पनिमा काम गर्नेहरुको तलबबाट कटाईन्छ।
कम्पनिमा काम नगर्नेहरुलाई, जुन १५ तिर कर तिर्न सूचना आउन सक्ने भएकोले अवश्य पनि खामभित्र हेर्नुहोला। तिर्नुपर्ने म्याद र शुल्क लेखिएको हुन्छ।
कोन्भिनी, बैंक वा हुलाक मार्फत तिर्नुहोला।
शहरी कर तिर्नु भएन भने, तपाईंको निवास कार्डको नविकरण गर्नमा समस्या पर्नुका साथै तपाईंको सम्पत्ति फुकुओका शहरले जपत गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ।
१८ वटा भाषाहरुमा, फोनमार्फत् परामर्श लिन सक्नुहुन्छ।
फोन नम्बर, ०९२-७५३-६११३
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.63
【वाशिंग मेशिन सफा गर्ने सम्बन्धि】
जुन महिना अत्याधिक वर्षासँगै आर्द्रता बेसी हुने मौसम हो। यस समयमा, किटाणुहरूको विकास सजिलै हुने र धूलोको कसिंगर पनि बढ्ने गर्छन्। त्यसैले सकेसम्म खानेकुराहरु फ्रिजमा राख्ने गरौँ।
साँच्चै, तपाईंहरुले वाशिंग मेशिन अन्तिम पटक कहिले सफा गर्नुभयो?
सम्भव भएमा महिनामा एक पटक वाशिंग मेशिन सफा गर्ने गरौँ। वाशिंग मेशिन सफा राख्दा किटाणुहरूको विकास हुन पाउँदैन।
सबैभन्दा सजिलो तरिका भनेको, १०० येन सप आदिमा बेकिंग सोडा, जापानी भाषामा ‘ज्युउसोउ’किनेर, लुगा नराखिकन वाशिंग मेशिनमा फिजाउने र पानी नफालिकन ५-६ घण्टा राखी छोड्ने।
तैरिएको फोहरलाई झिक्ने, अनि पखालेर फोहर पानीलाई फाल्ने।
सकेपछि, २-३ घण्टा जति ढकनी नराखिकन सुक्नदिऔं।
वाशिंग मेशिन डिटर्जन्टहरू पनि बजारमा पाउँछ, यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरि वाशिंग मेशिन सफा गरि राख्नुस्।
साथै, राती अबेर वाशिंग मेशिन चलाउनु भयो भने, छिमेकिलाई हल्ला हुन सक्छ, त्यसैले कृपया सम्भव भएमा दिनको समयमा प्रयोग गर्नुहोस्।
【चुयु र भारी वर्षा सम्बन्धि】
जापानमा जुनदेखि जुलाईसम्मलाई "चुयु" अर्थात् वर्षा ऋतु भनिन्छ र यस बखत भारी वर्षा हुने गर्दछI
यस वर्ष वर्षायाम चाँडै शुरु भई, उत्तरी क्युशु भेगमा मे १५ देखि वर्षायाम शुरू भयो।
भारी वर्षाको कारण प्रकोपहरू हुने सम्भावना भएकोले ध्यान दिनुहोला।
गत वर्ष, जुलाई २०२० मा, अत्याधिक मात्रामा भारी वर्षा भई, फुकुओका प्रान्तमा पनि भारी वर्षाले धेरै क्षति पुर्याएको थियोI
अधिक वर्षा हुँदा, नदी, तट वा पहाड नजिकको चट्टानहरू जस्ता खतराजनक ठाउँहरू नजिक नजानुहोस् र आफ्नो जीवन रक्षाको लागि कदम चाल्नुहोस्I
फुकुओका सिटिको होमपेजमा Hazard map र विपद् रोकथाम सम्बन्धि जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छI
आश्रय स्थलमा जाँदा मास्क लगाउने, हात धुने, आदि नयाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई रोक्न उपायहरू अपनाउन हुन अनुरोध गर्दछौं।
‘Support for Foreign Residents’ को साइटमा गएर, Fukuoka City Support for Foreigners को पेजबाट विपद् रोकथाम सम्बन्धि जानकारीहरु हेर्नुहोलाI
फुकुओका शहरको महत्वपूर्ण जानकारीहरु, फुकुओका सिटिको आधिकारिक Facebook ‘Global Community Fukuoka’ वा फुकुओका सिटी इन्टरनेशनल फाउण्डेसनको Facebook ‘फुकुओका शी कोकुसाई खाईखान्/ आत्ताखा फुकुओका「福岡市国際会館／あったか福岡」बाट पनि बहुभाषामा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छI पेजलाई follow गरेर, सामान्यदेखि महत्वपूर्ण जानकारीहरु लिनु होलाI
सबवे स्टेशन र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा छाता सापट लिन मिल्ने स्पटहरु भएकाले, स्मार्टफोन प्रयोग गरि छाता सजिलैसँग सापट लिन सक्नुहुन्छ।
चौबीसै घण्टा ७० येनमा प्रयोग गर्न सकिने, प्लास्टिकको छाता किन्नुभन्दा सस्तो र वातावरणलाई पनि राम्रो भएकोले, अचानक वर्षा हुँदा आदि जस्तोमा कृपया प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्I
बिस्तृत जानकारी ‘आइकासा फुकुओका शी’ 「アイカサ　福岡市」मा हेर्नुहोलाI
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.62
जापानी भाषा（日本語） , चिकित्सा तथा स्वास्थ्य（医療・保健）
युरोपमा जुन ब्राईडको किन्बदन्ति लामो समयदेखि चलिआएको छ, जस अनुसार "जुनमा विवाह गर्ने दुलही खुशी हुन्छिन्" भनिन्छ। यस्तो भन्नुमा, विभिन्न कारणहरू छन्, तर प्रमुख कारणहरूमध्ये एउटा भनेको, ग्रीक पौराणिक कथाको सर्वोच्च देवता ज्यूसकी श्रीमती, जसलाई विवाहको देवी हेराले सुरक्षित गर्छिन्, र उहाँको नामबाट जुन महिना आएको मानिन्छ।
एउटा भनाई यो पनि छ कि, युरोपमा खेतीपातीको व्यस्त समय, मार्चदेखि मेसम्मको विवाहमा रोक लगाएको थियो, त्यसैले जुनमा विवाह गर्ने धेरै मानिसहरू हुन्थ्यो।
यो लगभग ५० वर्ष पहिले जापानमा फैलियो, र होटल उद्योगले वर्षायामको जुन महिनामा विवाहको संख्या बढाउन बिभिन्न क्यानपेनहरु शुरू गर्‍यो।
हाम्रो नेपालमा भने प्रायःजसो बिवाह माघ फाल्गुणतिर हुने गर्छ नि है!
【やさしい日本語ラジオ講座 अर्थात् सरल जापानी भाषा रेडियो कोर्सको परिचय】
जुनदेखि “सरल जापानी भाषा रेडियो कोर्स” को प्रसारण शुरू हुन्छ!
यो कार्यक्रम, जापानी भाषा राम्ररी नबुझ्ने विदेशीहरू सबैका लागि हो, र यस कार्यक्रममा “सरल जापानी भाषा” मा बिस्तारै बोलिन्छ।
विदेशीहरुले जापानमा बसोबास गर्दा थाहा पाउनु पर्ने सूचनाहरुको बारेमा जानकारी दिईन्छ।
रेडियो प्रसारण, प्रत्येक शुक्रवार ११:५४ बाट हो भने, पहिलो पटकको प्रसारण जुन ४ मा छ।
बुझ्न नसकेको कुरा भएमा, वा सुन्न छुटेको भएमा पनि ठिकै छ!
Love FM को होमपेजमा पोष्ट गरिएको स्क्रिप्टमा हेरेर Podcast मा बारम्बार सुन्न सक्नुहुन्छ।
कृपया यसलाई सुनेर हेर्नुहोला।
【HIV परिक्षण बिस्तृतिकरण सप्ताहको बारेमा】
जुन १ देखि जुन ७ सम्मको १ हप्ता "HIV परिक्षण बिस्तृतिकरण सप्ताह" हो।
रेवाको दोस्रो वर्षमा, फुकुओका शहरको चिकित्सा संस्थानहरूले दिएको नयाँ रिपोर्ट अनुसार HIV संक्रमित व्यक्तिहरु २६ जना र एड्सका बिरामीहरू ९ जना थिए।
HIV संक्रमणको रोकथाम, प्रारम्भिक पहिचान र प्रारम्भिक उपचार महत्त्वपूर्ण छ।
HIV संक्रमण हुँदैमा, धेरैजसो लक्षणहरू नदेखिने भएकोले, संक्रमण छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन परिक्षण गर्न आवश्यक छ।
परिक्षण गर्न मिल्ने दिन तोकिएको हुनाले, कृपया जानुअघि Health and Welfare Center को होमपेज आदिबाट अग्रिम जानकारी लिनुहोला।
HIV संक्रमणको प्रारम्भिक पहिचान र उचित स्वास्थ्य सेवा र उपचारले एड्स फैलिने गतिलाई ढिलाइ गर्न सक्दछ। त्यसैले, आफुलाई शंका लाग्ने बित्तिकै, प्रारम्भिक परिक्षण गर्ने गरौँ।